GAROOWE: Dad Loo Qabtay Inay Faafinayeen Cudurka Dilaaga Ah Ee HIV AIDS | Berberatoday.com
GAROOWE: Dad Loo Qabtay Inay Faafinayeen Cudurka Dilaaga Ah Ee HIV AIDS
Garoowe(Berberatoday.com)-Ciidammada ammaanka ee Maamul-gobolleedka Puntland, ayaa qabtay Nin iyo Gabadh la sheegay inay qabaan Cudurka halista ah ee Aids-ka isla-markaana ay si ula kac ah ugu faafinayeen Dadka, sida ay sheegtay Hay’adda PAC oo Puntland u qaabilsan la dagaalanka Aids-ka.
Dr. Cabdiraxmaan Siciid (Dhego-weyne) oo ah Madaxa Hay’adda la dagaalanka Aids-ka u qaabilsan Puntland oo Maanta Warbaahinta kula hadlay Magaalada Garoowe, ayaa sheegay in labada Qof ee la qabtay ay Dadweyne reer Puntland si ku talo-gal ah ugu faafinayeen Cudurka Aids-ka, sidaasi darteed loo qabtay si looga hor-tago Aafada ay Xambaarsan yihiin.
Dr. Dhego-weyne oo arrimahaa ka hadlayaana wuxuu yidhi, “Labada Qof ee aanu haynaa waxay kala yihiin Rag iyo Dumar. Gabadha oo aan u dhalan Puntland waxay cudurka Aydhiska qaadsiisay ilaa saddex Rag ah oo hore u guursaday.”
Masuulkan oo hadalkiisa sii wataa wuxuu sheegay in Labada Qof ee ku eedeysan inay Faafinayeen Cudurka Aids-ka la hor-geynayo Maxkamad, “Labadan Qof waxaanu hor-geynaynaa Sharciga.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray oo uu Ciidammada Ammaanka Maamulka Puntland u soo jeediyay inay sii wadaan dedaallada ay ku raadinayaan dadka la nool Cudurka Aydhiska ee haddana sida ku talo-gelka ah u faafinaya.